देशभर सङ्क्रमणदर बढ्दो ,काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा कति संक्रमित थपिए ? सङ्क्रमण बढेसँगै स्मार्ट लकडाउनको तयारी – GALAXY
देशभर सङ्क्रमणदर बढ्दो ,काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा कति संक्रमित थपिए ? सङ्क्रमण बढेसँगै स्मार्ट लकडाउनको तयारी
काठमाडौ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३४०३ जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ११ हजार ८३९ पीसीआर परीक्षणमा २,६१३ र ४,९९९ एन्टिजेन परीक्षणमा ७९० जना गरी कुल ३,४०३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा २,१०४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने ४२ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ९९३ जना संक्रमित भेटिएका छन् । जसमध्ये काठमाडौंमा ७११, ललितपुरमा १६० र भक्तपुरमा १२२ जना संक्रमित भेटिएका छन् । हाल देशभर भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या ४० हजार ३३८ रहेको छ ।
नेपालमा भाइरस सङ्क्रमण बढेसँगै स्मार्ट लकडाउनको तयारी गरिएको कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशक समिति सीसीएमसीले जनाएको छ। सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न प्रभावकारी रणनीति अपनाउँदै स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको सीसीएमसी प्रमुख बालानन्द शर्माले बताउनुभयो ।
देशमा सङ्क्रमण दर बढेको छ तर सबै भागमा बढेको छैन। त्यसैले जोखिम र आवश्यकता अनुरूप नियम लागु गरिन्छ, शर्माले भन्नुभयो । जहाँ बढी सङ्क्रमित छन् त्यहाँ बढी कडाइ हुन्छ। जहाँ सङ्क्रमण दर धेरै छैन त्यस ठाउँलाई चलायमान राख्नुपर्छ। यो मोडललाई स्मार्ट लकडाउन भनिने छ । चाँडै नै यो सुरु हुनेछ ।